Imba > Nhau > Indasitiri Nhau > Shanduko dzekare dzekufamba kwemotokari
Nemukurumbira wemota dzakazvimiririra uye kuwedzera kwenzira dzekufamba dzakadai sekushanya-kwekutyaira, vafambisi vemotokari vava kunyanya kufarirwa nevaridzi vemota, uye vatove "chombo" chakakosha chekuti vamwe vanhu vafambe. Varidzi vemotokari vazhinji vanonzwa kuti hakuna ngozi kufamba nayo, kunyanya kana uchifamba kure. Kunyanya izvozvi, seInternet yeMotokari ichishandiswa zvakanyanya muhupenyu hwedu, kufambisa kufamba kwave kuita kuri nyore uye kutarisira.
Uku hakusi kungoziva kwauri kuenda, asi kukuudza kwauri kuenda iwe kana usipo, uye zvaunofanira kuziva, sekunge uri kumhanyisa mota, zvinokuudza munguva kuti uchazononoka kuti uve nechokwadi chavo Iva wakachengeteka uye dzivisa kutyora mitemo yemigwagwa panguva imwe chete.
Ndedzipi shanduko dzekare dzakaitika mukuvandudzwa kwenzvimbo dzekufambisa mota kusvika parizvino? Aya anotevera madiki akateedzana achagoverwa newe zvichibva pane yakatarwa nguva.
Kubva pamepu yekupururudza muna 1921 kusvika pakufamba kweasina magadzirirwo emota dzinozvidzivirira muChina nhasi, kuvandudzwa kwenzvimbo dzekufambisa ruzivo kwatora vadzidzi kweanoda kusvika zana ramakore.
Muchokwadi, pakutanga kwekufamba kwemotokari, kufamba kunongoenderana nemepu.
Vanhu vanoona kuti kutsveta mepu pachiuno hakusi nyore sekuisa padheshibhodhi. Naizvozvo, Daly yakaburitsa yekufambisa system inonzi "Iter-Auto", iyo inogona kusanganisirwa mumotokari dhibhodhi kuti igadzire mepu yekupuruzira. Iyo sisitimu zvakare yakagadzirirwa nemota yekubatanidza mitsara kuratidza otomatiki mepu yemuno uchityaira
Iri igore rakazara nezvakakosha nhoroondo. United States yakabudirira kuburitsa hurongwa hwekutanga hwekufamba-famba sataneti, inonzi "1B transit". Mumakore mashoma akatevera, mamwe ma satellite satifiti akaonekwa akateedzana.
Sisitimu iyi yakaiswa mukushandisa muna 1964. Iyo yezuva inoshandisirwa kugashira mawairesi uye nekupa rutsigiro rwekufambisa kwemahombekombe egungwa eApple Navy. Inogona kubatsira chitundumuseremusere kuti chione chinzvimbo chiripo, kuvimba nema satellites ari pamusoro pechitundumuseremusere, asi huwandu hwemasaiti panguva iyoyo, chiratidzo chinowanzonyangarika.
Gore iro, National General Motors Yekutsva Hofisi yakafambisa ruzivo rwekufambisa mumotokari, ndokugadzira nzira yekufambisa yekubatsira vadzidzi isingavimbe nema satellite eChina, anonzi "DAIR".
Iyi mhando yekutakura mudziyo ine yayo yega bhizinesi sevhisi manejimendi nzvimbo uye inopa maviri ekutaurirana tekinoroji migero. Inogona kuvandudzwa nemasaisai enhepfenyuro anovimba nemarambi emumigwagwa emigwagwa kuti awane ruzivo nezve yekufambisa kweChina. Magineti akadzika mumugwagwa anogona "kushandura" zviziviso zvezwi nezve inotevera kubuda uye yazvino yekumhanyisa kumhanyisa miganho. Vanotyaira vanogona kusarudza kuvimba zvakanyanya munzira dziri pedyo dzekufambisa nzira kuti vawane ruzivo rwekufambisa data. Panguva imwecheteyo, ivo vanodawo punchi kadhi kuti iite seyedhi museve (kuruboshwe, kurudyi kana kurudyi), nekudaro zvichinyatso kubatsira mutyairi kuti ashande zvakanaka kuti asvike kwairi kuenda.
Hofisi yeU.S. yeNaval Research yakaparura satellite yeNTS-2, ichigadzira nzira yekuuya kweNAVSTAR GPS.
Yekutanga nyika otomatiki mota yakatungamirwa yakaberekwa.
Kunyanya, inoshandisa yakavakirwa-mukati helium gyroscope kuti ione kufamba kwekutenderera kwemotokari, pachinzvimbo cheU.S. Panguva imwecheteyo, yakakosha servo giya yakaiswa mugearbox dzimba kuti ipe mhinduro kubatsira kuchengetedza kumira uye kumhanya kwemotokari, zvichigonesa mota kuratidza chinzvimbo chayo pamepu yakagadzika.
Etak yakavambwa naHorney uye ine yekufambisa system ine vector mepu inoratidzira iyo inongotenderera painotendeuka mota, ichibvumira kuti nzvimbo yacho ionekwe pamusoro pemepu. Panguva iyoyo, hombe database yekambani yakakwevera kwakawanda kutarisisa.
Kune imwe nhanho, ma satellite e GPS akapihwa mvumo chete muma1980. Nekudaro, kwakatenderedza 2000, hurumende yeUS yakazomisa kudzora kushandiswa kweGPS uye ndokuvhura data repasirese rakaringana kune vashandisi vechivanhu nevekutengesa pasirese.
Nekuenderera mberi kwekuvandudza uye kuwedzera kweChina Mobile's smart phone system mashandiro, makambani akadai saTomTom anogona kusarudza kugadzira nekushandisa nharembozha yekushandisa tekinoroji. Saka kambani yakavhura iyo navigator yePDAs, uye yakagadzirisa hwaro uye GPS inogamuchira kubatsira vadzidzi kuwana nzvimbo.
Iyo mota yekufambisa sisitimu yakagadziridzwa kusvika kune imwe nhanho, uye iyo yekumusoro-kumusoro yekuratidzira yakasikwa ikava inotevera nhandare nyowani yekuona kukura kweiyo yekufambisa tekinoroji musika. Saka Piyona akatanga chirongwa chayo cheNavGate. Iyi software sisitimu yakagadzirirwa kupa mabhizinesi nehumwe hunyanzvi hwekuchinja kweyechokwadi magariro echokwadi ekufambisa masevhisi. Huru huru inoratidzira screen inoiswa panzvimbo yemumvuri wezuva wemotokari kuratidza nzvimbo yemutyairi yekuona. Mufananidzo wakafukidzwa mukati.
Nekukurumidza kukurumidza kwesainzi uye tekinoroji, bhatani-bhatani rekufamba, izwi-rinodzorwa kufamba, mota network uye nharembozha kuwiriranisa ndiwo mafambiro ekuvandudza ekufambisa kwemota mune ramangwana.
Tevere:Nhanganyaya kune basa remota kutyaira rekodhi